Phakathi nenkathi yokukhulelwa, bonke abesifazane kufanele nokuncipha amasosha omzimba. Kubalulekile ukuthuthukiswa evamile esibelethweni. Ngokushesha emva kokukhulelwa, isidumbu sowesifazane uyabubona umbungu njengoba nomzimba angaphandle futhi uzama likhiphe. Lena kungani uhlobo nokubonakalisa ukuncipha ngamabomu ezivikela mzimba.
Umkhuhlane ngesikhathi sokukhulelwa
Ngokuqinisekile sonke siyazi ukuthi izidakamizwa elwa namagciwane ngesikhathi sokukhulelwa kungaba yingozi. Yingakho akufanele singayinaki siqu enhlalakahleni self-medicate. Yilokho iningi besifazane ababengewona ama-abakhulelwe wobulili fair.
Abantu besifazane abane-sesimweni ezithakazelisayo, umiswe njengetshe ngihlolwa ngokushesha ngangokunokwenzeka uma imikhuhlane. Kulesi Ukuhlolwa kwezimo zempilo ukunikeza hhayi kuphela owelapha, kodwa futhi udokotela wezifo zabesifazane.
Ukwelashwa nokuvikelwa imikhuhlane ngesikhathi sokukhulelwa
Izifo akufanele neze yokuhamba. Kufanele njalo ezifeza ukulungiswa ezifanele. Ezimweni eziningi, odokotela batusa ukusetshenziswa amakhambi abantu ukwelashwa. Nokho, kwezinye izimo nje kudingeka antivirals. Lapho sokukhulelwa ayivunyelwe nakanjani. Ngaso sonke isikhathi kufanele acabangele engu-fetus.
Imithi elwa namagciwane uma ukhulelwe: 1 yokuthathu
Kulesigaba umntwana esikhathini esizayo is ikakhulukazi ithonywe ngokungadingekile eminye zici. Ngo senyanga yokuqala sokukhulelwa ongakabi kwakhiwa umzanyana, ukuvikela ingane. Yilokho okufanele kube kungani niqaphelisise ukuthatha imithi ehlukile. Yidla iphilisi noma Potion kungaba kuphela iseluleko kadokotela. Ukuzilapha kungabangela umonakalo ongalungiseki usana olungakazalwa.
Imithi elwa namagciwane ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kuthathwe kanye babelwe nokushintsha kokudla nokufakwa ukuhambisana. Kaningi, odokotela ukunciphisa umthamo licaciswe ku abstract, ngaleyo ndlela befuna ukunciphisa umthelela ongemuhle embungwini. Ngo senyanga yokuqala, kungenzeka ukuthi inikwe amaphilisi "Arbidol", kodwa kuphela umthamo prophylactic. Kulokhu, ungakwazi neze ngumnikazi ukwandisa isibalo amaphilisi. Futhi, udokotela wakho angase akukhuthaze ukuphuza imithi "paracetamol", kodwa kufanele kwenziwe kuphela uma izinga lokushisa emzimbeni liphuma khona.
Nge ukuthuthukiswa zokugula sinuses babelwa amathonsi namagciwane "Pinosol" noma "Lasolvan". Balondekile umntwana, ngoba ngeke angena igazi, futhi abe ithonya wendawo kuphela. Futhi ukunisela emphinjeni ukuncoma ikhambi ukusetshenziswa "Lugol", "Chlorophillipt" noma fafaza uwoyela "Tantum Verde".
Ngo senyanga yokuqala sokukhulelwa ngangokunokwenzeka kumele kusetshenziswe imithi yesintu kuphela, kodwa awukwazi ukuthatha inani elikhulu vitamin C odingekayo ngosuku Yingakho udinga ukukhetha zokupheka kakhulu ngokuqapha kagogo.
Imithi elwa namagciwane ekukhulelweni: senyanga 2
Kulesi sigaba, impatho Kuthi kulula, kodwa kuyafaneleka ukuthi ngesikhathi senyanga yesibili akuvamile omama abakhulelwe agule. Imithi elwa namagciwane ngesikhathi sokukhulelwa (senyanga yesibili) akunamthelela ezingenzeka embungwini, njengoba kuvikela kwakhiwa placenta is. Nokho, lokhu akusho ukuthi lo muthi, kusukela kuleso sikhathi zingafundwa wedwa futhi ngaphandle kokucabanga. Kulesi sigaba, ke kuvunyelwe konke amathuluzi efanayo ukuthi udokotela watusa olukhona kusenesikhathi.
Imithi elwa namagciwane ngesikhathi sokukhulelwa, angasetshenziswa emva amasonto 14 kungase kube kanje: Drops "Interferon" amakhandlela "Viferon" ithebhulethi "Oscillococcinum" noma "Ergoferon".
Zonke lezi zinto aqukethe isithako esebenzayo eziyisisekelo: interferon. Uma emzimbeni, it sibopha ukuthi amaprotheni kususa amagciwane, okwandisa amasosha omzimba ayo. Indlela yokwazisa udokotela izidakamizwa akhethiwe kanye kuncike onjani igciwane wangena emzimbeni wakho.
Lapho imikhuhlane banal kubonelelwa kakhulu ama-amaphilisi kanye amathonsi. Nge leli lokugcina okulungiselelwe ngokwakho (kusuka impuphu, okuyinto angathengwa inethiwekhi ekhemisi).
Uma igciwane sekungene amathumbu akho, kufanele ukhethe lekhandlela. Yethulwe rectally futhi kanjani umzimba ngokushesha.
Yokuthathu yesithathu kanye nokwelashwa kwezifo ezibangelwa amagciwane
antivirals kuvunyelwe ngesikhathi sokukhulelwa (3 imigomo) bakha uhlu inkudlwana. Phakathi nale nkathi, wena amathuluzi efanayo ingasetshenziswa senyanga yesibili ingase yabelwe. Ngakho umthamo kungase kukhule njengoba prophylactic kokuvamile.
Futhi ngaphakathi leli gama ingelashwa nge ejenti elwa namagciwane. Kuba kudingekile esimweni lapho izidakamizwa elwa namagciwane abanamandla. Kulaba ama-antimicrobial amaphilisi "Flemoksin", "Fmoksitsilin" capsule kusho "Vilprofen" nabanye: lezi kungaba Kunconywa. Ngaphambi kokuqala le ndlela yokwelapha, kubalulekile ukuba kudlule webhaktheriya kwezitshalo luvelo kwezidakamizwa ezithile. Kanyekanye impatho enjalo kufanele athole izimali, oyobuyisela microflora emathunjini bese emgodleni kwangaphakathi.
Imithi elwa namagciwane ngaphambi kokuzalwa
Uma ugula phambi ukuzalwa komntwana, kubalulekile ukuba uqale ukwelashwa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Impilo engeyinhle ngesikhathi sokubeletha kungaholela nemiphumela engalindelekile. Kufanele kukhunjulwe mayelana nesikhathi kokuhoxiswa kokuhlelwa izidakamizwa elwa namagciwane emzimbeni. Uma uphuza ama-ejenti anti-microbial amahora ambalwa ngaphambi kokuzalwa kwengane, kungenzeka ukuthi ngeke bavunyelwe ukuba ngokushesha ukondla ubisi umntwana ibele. Zonke imithi kusukela umzimba kumele zisuswe phambi ibele. Yingakho ukwelashwa ngaphambi kokuzalwa ukuya abambe iqhaza.
Bheka ne-professional abanolwazi futhi ufunde wonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama lokhu kulungisa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho antivirals zingafundwa emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukukhulelwa. Ungacabangi ukuthi omama abakhulelwe kungavunyelwe noma iyiphi inqubo yokwelapha. ukwelashwa elwa namagciwane ingaba kwenziwe futhi kubalulekile, kodwa ngemva kokuba luhlolo kanye nodokotela aphoyintimenti.